Kooxda Liverpool oo wadahadallo la bilowday xiddig bartilmaameed u ah Real Madrid iyo Barcelona – Gool FM
(Liverpool) 28 Mar 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa wahadallo la bilowday laacib bartilmaameed ah labada Naadi ee ugu tunka weyn Spain.
Reds ayaa haatan wahadal la furtay sida la sheegay ciyaaryahan Ferran Torres oo ay doonayso saxiixiisa, kaasoo bartilmaameed ah Real Madrid iyo Barcelona.
Wargeyska Sport1 ayaa warinaya in Liverpool ay wada-xaajood la bilowday laacibka Kooxda Valencia ee Ferran Torres.
Naadiga reer England ee Reds ayaa ka mid ah kooxo badan oo sare oo la sheegay inay raacdo ugu jiraan saxiixa 20-sano jirkaan garabka ka ciyaara, iyadoo Real Madrid iyo Barcelona ay sidoo kale isha la raacayaan laacibkaan.
Laakiin kooxda hoggaaminaysa horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa la sheegay inay kordhiyeen danahooda, waxayna si sahlan ula jaan qaadi karaan qiimaha la sheegay in lagu iibsan karo laacibkan ee ah 30 milyan oo euro oo u dhiganta 27 milyan oo gini ama 33 milyan oo dollar.